Ogaysiis: Xuska 26-June oo lagu Qaban doono Magaalada Kassel ee Dalka Jarmalka.
Ogaysiis: Xuska 26-June oo lagu Qaban doono Magaalada Kassel ee Dalka Jarmalka. 0 June 24, 2015 in Wararka by somalilandlive Staff Visits: 1062
Ogaysiis: Xuska 26-June oo lagu Qaban doono Magaalada Kassel ee Dalka Jarmalka. Ogaysiis: Xuska 26-June oo lagu Qaban doono Magaalada Kassel ee Dalka Jarmalka.
Waxaa la Ogaysiinayaa Dadwaynaha Reer Somaliland ee ku Dhaqan Dalka Jarmalka in Maalinta 26-June lagu Qaban doono Magaalada Kassel Munaasabad loogu Dabaal degayo Maalintii Somaliland Xoriyadeeda ka qaadatay Gumaysigii Ingiriiska.
Munaasabadan oo ayaa lagu Soo Bandhigi Doonaa Taariikhdii Somaliland ee Lixdankii taasi oo ay ka soo qayb gali doonaan Aqoonyahanno iyo Waayeel soo gaadhay Wakhtigii Gobonimo Doonka. Munaasabadan ayaa lagu qaban doonaa Xarunta Dhaqanka ee Shlachthof Kulturzentrum ee Ciwaankeedu yahay Mombachstraße 12
34127 Kassel, Saacadu marka ay tahay 4-ta galabnimo
wixii Faahfaahinta kala Xidhiidh telefoonadan Hoos ku Xusan.015217914954
015217774880 No Comments yet... Print